နွေရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ အုန်းစိမ်းရည် သောက်ပါ…. - Real Gaming Myanmar
နွေရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ အုန်းစိမ်းရည် သောက်ပါ….
ရှေးလူကြီး များသည် နွေရာသီ ရောက်လာသော အခါ ကျောက်၊ ဝက်သက် စသော အပူကန်၊ အပူငုပ် ရောဂါများ ကာကွယ်နိုင်ရန် အသားမရင့် သေးသော အုန်းစိမ်းရည်ကို တိုက်လေ့ ရှိသည်။
အသား တည်ခါစ ဇွန်းခြစ်ဟု ခေါ်ဆိုသော အုန်းစိမ်းရည်သ ည် အုန်းခြောက်ရည် နှင့်မတူ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သည်။ အကျိုးသွား မှာလည်းမတူ။ အုန်းခြောက်ရည် သောက်လျှင် အပူကန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ယားနာများ ထခြင်း စသော ဆိုးကျိုးများ ခံစားရလေ့ ရှိသည်။
အုန်းစိမ်းရည်နှင့် အုန်းခြောက်ရည် မတူညီသော ခြားနားချက်မှာ အုန်းရည်ပေါ်တွင် အဆီများ ဝေ့နေလျှင် အုန်းခြောက်ရည် ဖြစ်နိုင်သည်။ အရသာမှာ အချိုနှင့် အငန် ရောစပ်နေသည်။ လေသလပ် ထားလျှင် ခဏအတွင်း အချဉ်ဓာတ်ပေါက် သွားလေ့ ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ရှေးက ဆေးဆရာကြီး များက ကျောက်၊ ဝက်သက် ရောဂါများ ကုသရာတွင် အုန်းစိမ်းရည် ချက်ချင်းမရ နိုင်ပါက နတ်အုန်းသီး ကဲ့သို့ အုန်းခြောက်ရည် ကို ယူပြီး မီးဖြင့် ဆူပွက်အောင် ကျိုကာ ဆေးနှင့် ရောတိုက်လေ့ ရှိသည်။
စာရေးသူသည် အလွန် ပူပြင်းသော နွေရာသီ တစ်ခုတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း သို့ကူးပြီး သန်လျင်မြို့ရှိ ကျောက်တန်း ရေလယ်ဘုရား သို့ သွားခဲ့ဖူးသည်။ ကျောက်တန်း ရေလယ်ဘုရား ၏ တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ခိုလှုံစရာ အရိပ်မရှိ၊ နေကလည်း ပူပြင်း နေချိန်တွင် အရိပ်မိုး ပေးထား သော အုန်းစိမ်း အခိုင်လိုက်ကို ချက်ချင်း ဖောက်ပြီး သောက်ရန် ရောင်းချသော ဆိုင်လေးများကို တွေ့ရသည်။
ဆိုင်ရှင် အမျိုးသမီးက ”နေပူထဲက လာရင် ရေခဲရေ မသောက်နဲ့ အပူငုပ်ပြီး လည်ချောင်း နာလိမ့်မယ်။ အုန်းစိမ်းရည် သောက်၊ အပူငြိမ်းတယ် ” ဟု ပြောသဖြင့် အုန်းစိမ်းရည် တစ်လုံးကို ပိုက်တပ်ပြီး စုပ်သောက်လိုက် သောအခါ ရင်တွင်းမှ အေးသွားပြီး အားရှိသွား သကဲ့သို့ ခံစားရ ပါသည်။
ဂျပန်ခေတ် ဆေးဝါး ရှားပါးသော ကာလက အားပြတ်သော လူနာများ၊ ဝမ်းလျှော၊ ဝမ်းပျက်သော လူနာများကို ဂလူးကို့စ် အချိုရည် မရှိသဖြင့် အုန်းစိမ်းကို ထိပ်မှ ကြွက်မြီးဖြုတ်ပြီး အပ်စိုက်ကာ အကြောဆေး အဖြစ် သွင်းပေး ရသည်ဟု ဖတ်ရဖူးသည်။
အုန်းစိမ်းရည် ၏ အစွမ်း သတ္တိမှာ အနောက်တိုင်း ဆရာဝန်များ ကပင် အသိအမှတ်ပြု သုံးစွဲကြ ရသည်။ အုန်းသီး၏ ထူးခြားချက် များမှာ အတွင်း၌ ရှိနေသော အုန်းရည်သည် မခွဲမဖောက် သမျှ ကာလပတ်လုံး ခန်းသွားသည်ဟု မရှိ၊ ချဉ်သွားသည် ဟူ၍လည်း မရှိပေ။
ယခုအခါ လူနေ ထူထပ်သော မြို့ကြီးများတွင် အပူရှိန် မြင့်တက်လာ သဖြင့် Heat Stroke ခေါ်အပူရှပ်၍ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက် သွေးကြော ပေါက်ခြင်းတို့ အဖြစ်များသော ရာသီဖြစ်သည်။ ဆီးပူ၊ ဆီးအောင့် ရောဂါများလည်း အဖြစ်များသည်။
အမျိုးသမီး များတွင် မီးယပ်ဖြူဆင်း ရောဂါ၊ သွေးဆင်းလွန် သောရောဂါများ ဖြစ်လေ့ ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ အပူကန်၊ အပူငုပ် ရောဂါများအတွက် အုန်းစိမ်းရည်ကို သောက်ပေး ခြင်းဖြင့် သက်သာ စေနိုင်သည်။
အမျိုးသား လူကြီးများ ဖြစ်လေ့ရှိသော ဆီးကျိတ်ရောင် ရောဂါကိုလည်း သက်သာ စေနိုင်သည်။ အုန်းစိမ်း ရည်သည် အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝပြီး အပူငြိမ်း ရုံသာမက အရိုးအဆစ်၊ အရွတ်၊ ကြွက်သားများပါ ကောင်းစေ နိုင်သော အာနိသင် အထူးရှိသည်။
ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်သူတစ်ဦးက အုန်းစိမ်းအနုကို ထိပ်ဖွင့် အပေါက်ငယ်မှကျောက်ချဉ်ခဲသေးသေး မန်ကျည်းစေ့ခန့်ကို ထည့်ပြီး တစ်နာရီခန့်အကြာပိတ်ထားပြီးနောက် အုန်းစိမ်းရည်ကို ပိုက်ဖြင့်စုပ်ယူ သောက်ခြင်းဖြင့် တစ်ပါတ်ခန့်ကြာသောအခါ ကျောက်သေးသေးလေးကျလာသည်ကို fb.တွင်ပုံနှင့်တကွတင်ပြထားသည်ကိုဖတ်ရှုရဘူးပါသည်။
ဥတုဘောဇနသင်္ဂဟကျမ်းအလို။ ။မနုမရင့် လတ်လတ်လောလောအုန်းသီးရည်သည် သုက်ကိုပွားစေတတ်၏။အဆီဩဇာရှိ၏။ချို၏။အချို့စဉ်းငယ်ဖန်၏။အေး၏။ကြေလွယ်၏။ရေငတ်ခြင်း သည်းခြေ လေနာတို့က်ိုနိုင်၏။၀မ်းမီးကိုတောက်စေတတ်၏။
ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) ၁၀.၄.၂၀၁၇ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
နှရောသီရောကျပွီဆိုတော့ အုနျးစိမျးရညျ သောကျပါ….
ရှေးလူကွီး မြားသညျ နှရောသီ ရောကျလာသော အခါ ကြောကျ၊ ဝကျသကျ စသော အပူကနျ၊ အပူငုပျ ရောဂါမြား ကာကှယျနိုငျရနျ အသားမရငျ့ သေးသော အုနျးစိမျးရညျကို တိုကျလေ့ ရှိသညျ။
အသား တညျခါစ ဇှနျးခွဈဟု ချေါဆိုသော အုနျးစိမျးရညျသ ညျ အုနျးခွောကျရညျ နှငျ့မတူ ဆနျ့ကငျြဘကျ ဖွဈသညျ။ အကြိုးသှား မှာလညျးမတူ။ အုနျးခွောကျရညျ သောကျလြှငျ အပူကနျခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ယားနာမြား ထခွငျး စသော ဆိုးကြိုးမြား ခံစားရလေ့ ရှိသညျ။
အုနျးစိမျးရညျနှငျ့ အုနျးခွောကျရညျ မတူညီသော ခွားနားခကျြမှာ အုနျးရညျပျေါတှငျ အဆီမြား ဝနေ့လြှေငျ အုနျးခွောကျရညျ ဖွဈနိုငျသညျ။ အရသာမှာ အခြိုနှငျ့ အငနျ ရောစပျနသေညျ။ လသေလပျ ထားလြှငျ ခဏအတှငျး အခဉျြဓာတျပေါကျ သှားလေ့ ရှိသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ရှေးက ဆေးဆရာကွီး မြားက ကြောကျ၊ ဝကျသကျ ရောဂါမြား ကုသရာတှငျ အုနျးစိမျးရညျ ခကျြခငျြးမရ နိုငျပါက နတျအုနျးသီး ကဲ့သို့ အုနျးခွောကျရညျ ကို ယူပွီး မီးဖွငျ့ ဆူပှကျအောငျ ကြိုကာ ဆေးနှငျ့ ရောတိုကျလေ့ ရှိသညျ။
စာရေးသူသညျ အလှနျ ပူပွငျးသော နှရောသီ တဈခုတှငျ ရနျကုနျမွို့မှ မွဈတဈဖကျကမျး သို့ကူးပွီး သနျလငျြမွို့ရှိ ကြောကျတနျး ရလေယျဘုရား သို့ သှားခဲ့ဖူးသညျ။ ကြောကျတနျး ရလေယျဘုရား ၏ တဈဖကျကမျးတှငျ ခိုလှုံစရာ အရိပျမရှိ၊ နကေလညျး ပူပွငျး နခြေိနျတှငျ အရိပျမိုး ပေးထား သော အုနျးစိမျး အခိုငျလိုကျကို ခကျြခငျြး ဖောကျပွီး သောကျရနျ ရောငျးခသြော ဆိုငျလေးမြားကို တှရေ့သညျ။
ဆိုငျရှငျ အမြိုးသမီးက ”နပေူထဲက လာရငျ ရခေဲရေ မသောကျနဲ့ အပူငုပျပွီး လညျခြောငျး နာလိမျ့မယျ။ အုနျးစိမျးရညျ သောကျ၊ အပူငွိမျးတယျ ” ဟု ပွောသဖွငျ့ အုနျးစိမျးရညျ တဈလုံးကို ပိုကျတပျပွီး စုပျသောကျလိုကျ သောအခါ ရငျတှငျးမှ အေးသှားပွီး အားရှိသှား သကဲ့သို့ ခံစားရ ပါသညျ။
ဂပြနျခတျေ ဆေးဝါး ရှားပါးသော ကာလက အားပွတျသော လူနာမြား၊ ဝမျးလြှော၊ ဝမျးပကျြသော လူနာမြားကို ဂလူးကို့ဈ အခြိုရညျ မရှိသဖွငျ့ အုနျးစိမျးကို ထိပျမှ ကွှကျမွီးဖွုတျပွီး အပျစိုကျကာ အကွောဆေး အဖွဈ သှငျးပေး ရသညျဟု ဖတျရဖူးသညျ။
အုနျးစိမျးရညျ ၏ အစှမျး သတ်တိမှာ အနောကျတိုငျး ဆရာဝနျမြား ကပငျ အသိအမှတျပွု သုံးစှဲကွ ရသညျ။ အုနျးသီး၏ ထူးခွားခကျြ မြားမှာ အတှငျး၌ ရှိနသေော အုနျးရညျသညျ မခှဲမဖောကျ သမြှ ကာလပတျလုံး ခနျးသှားသညျဟု မရှိ၊ ခဉျြသှားသညျ ဟူ၍လညျး မရှိပေ။
ယခုအခါ လူနေ ထူထပျသော မွို့ကွီးမြားတှငျ အပူရှိနျ မွငျ့တကျလာ သဖွငျ့ Heat Stroke ချေါအပူရှပျ၍ လဖွေတျခွငျး၊ ဦးနှောကျ သှေးကွော ပေါကျခွငျးတို့ အဖွဈမြားသော ရာသီဖွဈသညျ။ ဆီးပူ၊ ဆီးအောငျ့ ရောဂါမြားလညျး အဖွဈမြားသညျ။
အမြိုးသမီး မြားတှငျ မီးယပျဖွူဆငျး ရောဂါ၊ သှေးဆငျးလှနျ သောရောဂါမြား ဖွဈလေ့ ရှိသညျ။ ထိုကဲ့သို့ အပူကနျ၊ အပူငုပျ ရောဂါမြားအတှကျ အုနျးစိမျးရညျကို သောကျပေး ခွငျးဖွငျ့ သကျသာ စနေိုငျသညျ။
အမြိုးသား လူကွီးမြား ဖွဈလရှေိ့သော ဆီးကြိတျရောငျ ရောဂါကိုလညျး သကျသာ စနေိုငျသညျ။ အုနျးစိမျး ရညျသညျ အာဟာရဓာတျ ကွှယျဝပွီး အပူငွိမျး ရုံသာမက အရိုးအဆဈ၊ အရှတျ၊ ကွှကျသားမြားပါ ကောငျးစေ နိုငျသော အာနိသငျ အထူးရှိသညျ။
ကြောကျကပျကြောကျတညျသူတဈဦးက အုနျးစိမျးအနုကို ထိပျဖှငျ့ အပေါကျငယျမှကြောကျခဉျြခဲသေးသေး မနျကညျြးစခေ့နျ့ကို ထညျ့ပွီး တဈနာရီခနျ့အကွာပိတျထားပွီးနောကျ အုနျးစိမျးရညျကို ပိုကျဖွငျ့စုပျယူ သောကျခွငျးဖွငျ့ တဈပါတျခနျ့ကွာသောအခါ ကြောကျသေးသေးလေးကလြာသညျကို fb.တှငျပုံနှငျ့တကှတငျပွထားသညျကိုဖတျရှုရဘူးပါသညျ။
ဥတုဘောဇနသင်ျဂဟကမျြးအလို။ ။မနုမရငျ့ လတျလတျလောလောအုနျးသီးရညျသညျ သုကျကိုပှားစတေတျ၏။အဆီဩဇာရှိ၏။ခြို၏။အခြို့စဉျးငယျဖနျ၏။အေး၏။ကွလှေယျ၏။ရငေတျခွငျး သညျးခွေ လနောတို့ကိုနိုငျ၏။ဝမျးမီးကိုတောကျစတေတျ၏။
ကွညျလှငျမွငျ့(မုဒွာ) ၁၀.၄.၂၀၁၇ မွနျမာ့အလငျးသတငျးစာ
Previous: ဆရာဝန် ညီလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆေးခန်းကို လာပြတာ အသက် ၂၀ ကျော် ကောင်ကလေး ၊ သူ့စအိုကနေ အကောင် အရှင်လေးတွေ ….
Next: တော့တင်ဟမ်တို့ ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်ရောက်သွားတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေ တောက်ပ နိုင်ခဲ့ကြသလဲ ?